သင့်ကိုချစ်ခင်သူတွေကို ပိုတန်ဖိုးထားတတ်လာလို့ ။
သင့်ကို အားကျသူတွေကို ပိုဂရုစိုက်လာတတ်လို့ ။
သင့်ကို မစွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့သူတွေကို ပိုင်ဆိုင်လာရလို့ ။
သင့်ကို ကယ်တင်မဲ့သူတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ခွင့်ရနိုင်လို့ ။
ဘယ်သူက သင့်ကို အဆိုးတွေဖြစ်စေသလဲ
ဘယ်သူက သင့်ကို ရှုံးနိမ့်စေခဲ့သလဲဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး
ဘယ်သူက သင့်ကို အကောင်းတွေဖြစ်စေသလဲ
ဘယ်သူက သင့်ကို ကယ်တင်တဲ့သူလဲဆိုတာ ပိုအရေးကြီးပါတယ် ။
29-Sept 2017 #ttcdailyquotes
အလွမ်းဗေဒ (Poem )
သတိရခြင်းဆိုတာ ဘယ်လို ခက်ဆစ်မျိုးလဲ
နင် .. နေ့စဉ် ကျန်းမာ .. ချမ်းသာခြင်းတွေပါ ။
အများကြီးပါ . . .
တကယ်ဆိုရင် နင်နဲ့ငါ့ကြားထဲက လေဟာနယ်ဆိုတာ
ငါဟာ ဥပက္ခာ ပြုခြင်းကို ဆွံ့အခဲ့ရ
ငါဟာ အမုန်းတချို့ကို ဆွံ့အခဲ့ရ
ငါဟာ သွေဖယ်ခြင်းတချို့ကို ဆွံ့အခဲ့ရ
ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဟာ မှုန်ဝါးပျောက်ကွယ်သွားတော့မလို ။
နင့်အပေါ်ထားတဲ့ ငါ့ရဲ့ အဖြူရောင်အိပ်မက်တွေပါ ။
လေတိုးသံလေး တစ်ခုသက်သက်ပါ ။
မိုင်ပေါင်း ၁၀၀၀ မက ဝေးသွားတဲ့အခါ
ငါ ပျိုးခဲ့တဲ့ ပန်းဥယျာဉ်မှာ
ဘယ်လို အလွမ်းတွေ ပွင့်ကြဦးမလဲ
ငါ မသေဆုံးခဲ့ချင်လို့ပါ ။
အားနည်းချက်တွေနဲ့ တိုက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ရ
ဒါဟာ ဒဏ္ဍာရီလာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်တဲ့လား ကွယ် ။
နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါ . . .
နင့်အတွက် .. ငါ့ရဲ့
ချစ်ခြင်းတရားတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့ကွယ် ။
28 Sept-2017 #ttcpoems
Labels: Facebook ပေါ်မှ စာစုများ, ကဗျာ, အတွေးအမြင်စာစုများ, နှလုံးသားအာဟာရ
စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့အခါ .. ဒီစာစုလေးတွေဖတ်ကြည့်ပါ
- ဘ၀မှာ ဘာစိန်ခေါ်မှ မရှိခဲ့ရင် သင်လည်း ဘာမှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး
- ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်လဲကျခဲ့ရင် ရှစ်ကြိမ်မြောက် ပြန်ထ ဖို့က သင့်တာဝန်ပါ
- နေ့စဉ်အနည်းငယ်မျှ ပြောင်းလဲကြည့်ပါ .. တစ်ချိန်မှာ ကြီးမားတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုသင်တွေ့ရမှာပါ
- ခက်ခဲမှုတွေအားလုံးက လှပတဲ့ လမ်းဆီဦးတည်နေတာကို သင်သိပါသလား
- သိုးတစ်ကောင်လို နှစ် ၁၀၀ နေရတာထက်စာရင် ခြင်္သေ့တစ်ကောင်လို တစ်ရက် ရှင်သန်ရတာက ပိုရဲရင့်ပါတယ်
- ဘ၀ထဲကို တန်ဖိုးမရှိပဲ လွယ်လွယ်ရောက်လာတဲ့အရာတွေဟာ လွယ်လွယ်ပဲပြန်ထွက်သွားလေ့ရှိတယ်
- ဘယ်သူမှ မယုံဘူးဆိုရင်တောင် သင့်ကိုယ်သင် ယုံနေဖို့တော့လိုတယ် သင်ဘာလုပ်နိုင်သလဲဆိုတာကိုပေါ့ ။
26-Sept 2017 #ttcdailyquotes #ttcmotivation
အချိန်တွေကုန်နေတာထက်စာရင် ပေါ့ ။
မှန်တွေချည်း ရွေးလုပ်ဖို့ဆိုတာ သိပ်မလွယ်လှပါဘူး ။
နေ့ နဲ့ ညလိုပါပဲ
အရာရာကို ကြံ့ကြံ့ခံ အံတုရင်းနဲ့ပဲ
ကိုယ်မျှော်လင့်တဲ့ နေရာတစ်ခုကို မလွဲမသေ ရောက်လာမှာပါ ။
25-Sept 2017 #ttcdailyquotes
လူတစ်ယောက်ကို အရမ်း မေတ္တာရှိတယ်ဆိုရင်
" သံယောဇဉ်ကို အခြေခံပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့
ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အခွင့်အရေးပေး ကူညီခြင်းပါပဲ "
အရာရာဟာ အကောင်းဖက်ကို ပြောင်းလဲလာမှာပါ ။
23-Sept 2017 #ttcdailyquotes
- ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ပြုပြင်ပါ
- ကိုယ့်ဆီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နောင်တ တရားကိုလက်ခံပါ
- တစ်ဖက်သားရဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်တောင်းခံရယူပါ
ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့
ဒါဟာ သင်ရရှိတဲ့ အမှားတွေရဲ့ သေရာပါ နောင်တတွေပါပဲ ။
သင် ဘာမှ မကြိုးစားရင်တော့ ...
ဘာအခွင့်အရေးမှ လည်း ရလာမှာမဟုတ်ဘူး ။
23- Sept 2017 #ttcdailyquotes
အမှားနဲ့ကင်းတဲ့လူဆိုတာ မရှိလို့ပါ ။
သင့်ကို နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်လိမ်နေဦးမှာမို့လို့ပဲ ။
ကိုယ်မှားလို့ မှားမှန်းမသိတာ အဆိုးဆုံးပဲ ။
22-Sept 2017 #ttcdailyquotes
အဲ့ဒီအမှားရဲ့ နောင်တတရားကို သင်ခံစားရမယ်
ထပ်တူညီသော နာကျင်ခြင်းကို သင်လည်းခံစားရမယ်
အေးချမ်းခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သင်စွန့်လွှတ်ရမယ်
လောကကြီးမှာ ဘယ်လို အရာဖြစ်ဖြစ်
ကိုယ်လုပ်ခဲ့သမျှ ကိုယ့်ဆီကို တနည်းနည်းနဲ့
21-Sept 2017 #ttcdailyquotes
အဲ့ဒါ " ဓမ္မ " ပဲ
အဲ့ဒါ " အဓမ္မ " ပဲ
20-Sept 2017 #ttcdailyquotes
အိပ်မက် တမ်းချင်း ...
ကိုယ်ဟာ အကြိမ်ကြိမ် သေဆုံးခဲ့ရ
တကယ်ဆို .. အိပ်မက်မက်သူတစ်ယောက်အတွက်
ဒီမြစ်ကျဉ်းထဲ ကိုယ်ဟာ ရှင်သန်ခြင်းတွေ ပွေ့ဖက်
သံယောဇဉ်တွေ နက် တယ် ။
ဒါဟာ ..ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲက တမ်းချင်းတစ်ပုဒ်ပါ
ကိုယ်ဟာ အကြိမ်ကြိမ် ဖျားနာခဲ့ရ
အချစ်ရယ် ... ။
စစ်မြေပြင်မှာ ပန်းတွေ မပွင့်တတ်မှန်း
ကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲ ကြယ်တွေ လင်းလက်နေပုံ ။
ယုံကြည်မှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ... ။
" ကိုယ့်ဘေးအိမ်က ဆူညံသံတွေကြောင့်
ကိုယ့်အိမ်တံခါးကို လုံအောင်ပိတ်ထားလိုက်ယုံပါပဲ "
" ကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောတဲ့ အတင်းစကားတွေကြောင့်
ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ကောင်းအောင်လျောက်လှမ်းပြလိုက်ပါ "
သင့်ကို အတွေ့အကြုံတွေ သင်ပေးလိမ့်မယ်
သင့်ကို သင်ခန်းစာတွေ ပေးလိမ့်မယ်
သင့်ကို အမှတ်တရတွေ ပေးပါလိမ့်မယ်
ကိုယ့်ဘ၀ကို အကောင်းဖက်ကို ဦးတည်စေပါတယ် ။